Ndepụta SAS nke obodo ime obodo na mba ọhụrụ na -aga
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndepụta SAS nke obodo ime obodo na mba ọhụrụ na -aga
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
E guzobere Sistem ụgbọ elu Scandinavian (SAS) na 1946 site na nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ụgbọ elu Scandinavia atọ - Det Danske Luftfartselskab, ụlọ ọrụ ụgbọ elu Danish; Den Norske Luftfartselskap, onye na -ebu ụgbọelu Norway; na Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, ụlọ ọrụ ụgbọ elu Sweden.
Taa SAS ka siri ike yana na mgbasawanye mgbasa n'agbanyeghị ajọ ọrịa COVID-19.
SAS na -abawanye tọ na -efegharị site na isi obodo Scandinavia Stockholm, Copenhagen, Oslo na Bergen gaa ebe dị mkpa na netwọkụ ya iji meziwanye njikọta maka ndị njem.
SAS ga na-eje ozi ebe obibi ya niile na Norway na Sweden mgbe emepegharịrị ụzọ Arlanda-Sundsvall na Septemba.
Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na SAS gaa ebe dị mkpa maka ndị njem ụgbọ elu na Europe ga -abawanye.
Mmasị na -abawanye na njem izu ụka na ezumike obodo na obodo Europe na -eme ka SAS maliteghachi ụzọ ya na Amsterdam, Dublin, Florence, Krakow, na Prague. Enwekwara ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ụgbọ elu na -aga ebe ọkụ Mediterranean na ndịda Europe na agwaetiti Canary iji gboo ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ndị na -eme ezumike.
SAS ga -efepụ ụzọ ndị ọzọ kpọmkwem site na isi obodo Scandinavia ruo ọtụtụ ebe US ga -amalite site na Septemba gaa n'ihu, ọ ga -anọkwa na Eshia n'okporo ụzọ si Copenhagen ruo Tokyo na Shanghai.
SAS gara n'ihu na-ebubata ụgbọ elu ọhụrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee otu n'ime ụgbọ mmiri kacha ọhụrụ na Europe. Ụgbọ elu ọhụrụ ahụ nwere mmanụ ọkụ 15-30% dị ala, ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ha na -anọchi. Ụgbọ elu ọhụrụ a ga-enye ndị ahịa SAS ụzọ njem na-atọ ụtọ, dị mma ma na-adigide.
SAS na -ejikọ Scandinavia na ụwa na -eje ozi ebe ndị a:
Skellefteå Stavanger Bodø Undlesund
.Stersund Amsterdam Kristiansand
Amsterdam Barcelona Ogologo afọ Aberdeen
Larnaca Helsinki Faro Undlesund
Ihe mkpuchi Milan Miami
Nice Ihe mkpuchi New York
Prague Paris Reykjavík
Rome Reykjavík Rome
Kewaa Rome Kewaa
Otu onye ọkwọ ụgbọ elu nwụrụ, abụọ merụrụ ahụ n'ime ụgbọ elu abụọ...